हामीलाई अनुशासन रचनात्मक हुनु किन आवश्यक छ? | क्रिएटिव अनलाइन
यो अक्सर जब हामी संदर्भ गर्छौं एक नि: शुल्क अनुशासनको रूपमा रचनात्मकता र कला। दिनको कुनै पनि समयमा प्रेरणा को एक प्रभाग आउँछ र तपाईंलाई काममा राख्दछ। हाम्रो पात्रोमा घण्टा गणना हुँदैन यसैले हामी आफैंलाई बढी प्राकृतिक देखाउँछन् जब हाम्रो काममा काम गर्दछन्। एक प्रशासकीय को जस्तै एक वर्ग काम देखाइएको छैन। र किनकि हामी प्रशासनिक छैनौं, हामीसँग तालिका वा दिशानिर्देश छैन। त्यो अनुशासनको अभावले हाम्रो कल्पनाशक्तिलाई पनि दिक्क बनाउँछ.
हामीलाई अनुशासन रचनात्मक हुनु किन आवश्यक छ? कार्यक्रमको अभावले हामीलाई आवश्यक भन्दा बढी काम गर्न सक्दछ, र यद्यपि कहिलेकाँही यस्तो लाग्छ कि यो एक फाइदा हो जब हामी प्रोजेक्टमा डूबेका छौं, कहिलेकाँही यो हुँदैन। धेरै पटक यो छैन। यी ज्यादतीहरूले तपाईंलाई गरिरहनुभएको गतिविधिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने तपाईंको क्षमता गुमाउन सक्छ। साथै, निश्चित रूपमा प्रगति देखेर पनि तपाईंको रुचि हराउनुहोस्। त्यो क्षण जब हामीलाई थाहा छैन कसरी छोड्नु राम्रो हुन्छ।
कहिलेकाँही यसले तपाइँलाई छोडेर अन्तमा पुग्दछ, को क्षणमा पुग्न "म भोली शुरू गर्छु" र हाम्रो टाउकोको लागि अस्वीकार्य ज्यादतीहरूको निरन्तर इन्कार प्रविष्ट गर्नुहोस्। इन्स्टाग्राम, फेसबुक, आदि हाम्रो सहयोगी बन्नुहोस् ती खाली ठाउँहरू भर्न। यसैले सृष्टिकर्ताको लागि अनुशासन पनि आवश्यक छ।
केही व्यक्ति जो अनुशासन पाउँदछन् तिनीहरूको दैनिक दिनको लागि चाहिन्छ यो blame बजेको "पुरानो चाल" मा दोष दिन्छ। Hours घण्टामा तपाइँको दिनलाई तीन भागमा विभाजित गर्दछ: सुताउनुहोस्, काम गर्नुहोस् र तपाईंको फ्रि समय प्रयोग गर्नुहोस्। जबकि यो सत्य हो कि यस्तो अनुशासनमा पुग्न जटिल छ र सबैजना सफल हुँदैनन् राति यो रचना अघिल्लो प्रयास र समर्पण समय बिना धेरै बनाउनुहोस्। तर यदि केहि चरणहरू छन् जुन हामी पुग्न अघि लिन सक्दछौं पराकाष्ठा हाम्रो उद्देश्य को.
3 नुहाउने र यसको तापक्रम
हरेक खाना पछि दाँत माझ्ने काम। केहि अवसरहरूमा धेरै मानिसहरूले यस गतिविधिलाई पछाडि छोडिदिन्छन् किनकि उनीहरू आफ्नो मोबाइलमा हेर्छन् र केहि व्यक्तिको लागि चाखलाग्दो कुरा देखेका छन्। हामी बिर्सन्छौं वा अन्य समयमा हामी आफैं बाहिर भेट्छौं र हामी यो गर्न सक्दैनौं। त्यो निम्नका प्रत्येक कार्यहरूको विचार हो। त्यो नै हाम्रो समयलाई अवरोध गर्ने कुरालाई प्राथमिकता लिनु हो।
साधारण खाना खाए पछि दाँत माझ्नु जस्तो तपाईंको दिनको बानी बसाल्छ। र यो एक अर्डर सिर्जना गरेर सुरू हुनेछ। याद गर्नुहोस्, यसलाई छोड्नुहोस्।
यो व्यायाम भाँडा माझ्नको लागि पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं दाँत माझ्ने बानीमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं खाना पकाएपछि भाँडा माझ्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। केही फरक पर्दैन यदि तपाईंसँग डिश वाशर छ वा कसैले पहिले नै ती कार्यहरू गर्यो। जब तपाईं खाना समाप्त गर्नुहुन्छ, तपाईंको थाल, तपाईंको गिलास र तपाईंको कटलरी, तिनीहरूलाई आफैंले धुनुहोस्।
मेरो लागि, मेरो तालिकामा सबैभन्दा गाह्रो कार्यहरू। कामको साथ ओछ्यानबाट बाहिर निस्कँदै यो पहिले नै हो र गर्दै गर्नु भएको छ। र सिद्धान्तमा उही दिन केहि घण्टा पछि यसलाई पूर्ववत गर्ने उद्देश्यको साथ। तर यो आवश्यक छ। यो बानीले तपाईंलाई तपाईंको दिनको सुरूवातमा आदेश दिन्छ। तपाईले दिनको पहिलो मिशन पूरा गर्नु भएको छ, त्यसैले अरुको सामना गर्नु पनि यस्तै हुनेछ सरल ओछ्यान कसरी बनाउने।
साथै, जब तपाइँ घर फर्कनुहुन्छ, अर्डरले तपाईंलाई आराम गर्न र कम दिनको साथ बाँकी दिनको मजा लिन मद्दत गर्दछ।
नुहाउने र यसको तापक्रम
हामी सबै एक राम्रो पानी तापमान संग नुहाउन आवश्यकता महसुस। हाम्रो आफ्नै बहाना संग लड्न हामी सामना सबैभन्दा जटिल कार्य हो। हाम्रो स्नानको अन्तिम सेकेन्ड प्रयोग गर्ने त्यो असुविधासँग सामना गर्न हामीलाई थप अनुशासन प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ धेरै धेरै अनुशासनहरू छन् जुन हामी आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि अनुसरण गर्न सक्छौं। यो पनि तपाईंको जीवनमा निर्भर गर्दछ, मैले लेखहरूमा मेरो काममा अनुशासन दिने प्रस्ताव गरेको छु, यदि तपाईं लेख्नुहुन्छ भने त्यसो गर्नु राम्रो विचार हो। त्यहाँ अधिक परिष्कृत र साधारण छन्, तर महत्त्वपूर्ण कुरा सुरू गर्नु हो। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ यी steps चरणहरू एकै साथ पछ्याउन सक्षम हुनुहुन्न भने, एउटा सुरू गर्नुहोस्। तर यो तपाइँको लागि सबैभन्दा असहज बनाउनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » हामीलाई अनुशासन रचनात्मक हुनु किन आवश्यक छ?
Log लोगोहरू जुन अझै परिवर्तनबाट बचाइन्छ